Sony gosipụtara akara mbụ ya kacha njọ na usoro nke ire ere | Gam akporosis
Sony na-egosi ahịa ya kacha njọ na nkeji iri na ise
Edere Ferreno | | Mobiles, Sony
Anyị amatala ogologo oge na ọnọdụ dị na nkewa ekwentị Sony abụghị nke kachasị mma. Na 2018, akara ndị Japan rere nde ekwentị 6,5 n'ụwa niile. Nke a bụ ọnụ ọgụgụ ya kachasị dị ala, ezigbo ngosipụta nke ụdị ika ahụ na ahịa na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ná mmalite nke afọ a ka a mara ọkwa mgbanwe na ụlọ ọrụ, site na nhazighari nke nkewa ya.
N'agbanyeghị nke a, ahịa ụlọ ọrụ anaghị adị mma na mbido afọ. Na mgbakwunye, ụbọchị ole na ole gara aga ọ kwadoro na Sony ga- kwụsị ire ekwentị na Latin America. Ugbu a, anyị nwere ahịa siri ike na nkeji iri na ise nke afọ.
Companylọ ọrụ abanyela aka na nke mbụ ya kachasị njọ na akụkọ ihe mere eme na 2019. Dị ka o kwere omume ịmata, Sony rere otu nde ekwentị n'ụwa niile n'ime ọnwa atọ mbụ n'afọ a. O nwetụbeghị mgbe ha rere obere ụwa dum. Ihe omuma ohuru nke oge ojoo ya.
Ọ bụ ezie na ekwesịrị iburu n'uche na ụlọ ọrụ ahụ emeghebeghị ekwentị ọ bụla na ahịa na nkeji iri na ise nke afọ. Agbanyeghị na MWC 2019, emere na ngwụcha February, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara ụdị ọhụrụ ya, ndị Xperia 1 y ndị Xperia 10Onwebeghị ekwentị ndị a ewepụtara n'ụlọ ahịa.
Yabụ ọ ga - ekwe omume na mgbe ụdị Sony ndị ọhụrụ a dara n’ahịa ahịa nwere ike ịbawanye. N'ọnọdụ ọ bụla, ụlọ ọrụ ahụ ga-etinyela ihe mgbaru ọsọ nke ọ dịkarịa ala karịa ahịa nke afọ gara aga, nke kachasị njọ na akụkọ ihe mere eme ya. Ya mere, ọ ga-adị mkpa ịhụ ma ekwentị ndị ọhụrụ a mere ihe iji gbanwee nke a.
N'aka nke ọzọ, ewepụla na Sony na-ekwupụta ọpụpụ ya na ahịa ndị ọzọ, dị ka o mere na Latin America. Companylọ ọrụ ahụ na-ahọrọ ilekwasị anya na mbọ ndị ahụ na-ere nke ọma. Yabụ enwere ike inwe mgbanwe n'ọnwa ndị a. Ebumnuche nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ịnọgide na ahịa ekwentị mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Sony na-egosi ahịa ya kacha njọ na nkeji iri na ise
Huawei ga-ebu ụzọ bido 100.000 nke Huawei Mate X
Samsung Galaxy Note 10 Pro ga-eru 4.500 mAh